सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक
आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस तथा गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्नेहरूको हानथाप हुने क्रम बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि उनी गत २९ असारमा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्त भएकै दिन देउवाले आफ्नै दलका २ जना र गठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका २ गरी ४ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
देउवाले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्द्वारा मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएको १३ दिन बितिसकेको छ । तर पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा समग्र सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । हाल देउवासहित ५ जना मन्त्रिपरिषद् रहेकाले उनले अब जम्मा २० जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन् । त्यसमा पनि मन्त्रालयको संख्या २१ मात्रै रहेकाले फूल मन्त्री १७ जना मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् भने बाँकी ४ जना राज्यमन्त्री बनाउनुपर्छ ।
नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफंै १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन विवश छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय लिन निकै कठिन भइरहेको छ भने प्रशासनिक कामकाजमा समेत उल्झन आइपरिरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्रीको अभावमा मन्त्रालयको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा छलफल गर्नुपरेमा सचिव फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्न अत्यधिक हानथाप भइरहेको र त्यसले नेतृत्वमा रहनेलाई निकै सकस परिरहेको तथ्य माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंले खोलेका छन् ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेको लर्को लागेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिले आफूलाई आतंकित पारेको बताए । ‘कसलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे मेरो दिमागमा आतंक छाएको छ, हाम्रा ४९ जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ,’ दाहालले भने । गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले बढीमा ७ वटासम्म मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक सहमति छ । २ जना भने सुरुकै दिनमा मन्त्री भइसकेका छन् । दाहालले आफ्नो निवासमा ४/५ दिनदेखि मन्त्री बन्ने चाहना गर्नेहरूको लर्को लागेकाले आफू मानसिक तनावमा भएको समेत बताए ।
सबै जनालाई मन्त्री नै चाहिने संस्कार र प्रवृत्ति गलत भएको स्पष्ट पार्दै प्रचण्डले आदर्शको कुरा गरेर नथाक्नेहरूले समेत जसरी पनि मन्त्री बनाउनैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको बताए । उनले मन्त्री नभए पार्टीभित्र नेतृत्वलाई सराप्ने प्रवृत्ति जबरजस्त रहेको जनाए ।
देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा गठबन्धनसहित महन्थ ठाकुर समूहको राजपाको सहित १६५ मत पाएका थिए । उनलाई गठबन्धन सरकारमा गठबन्धन दलका रूपमा रहेका माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यसमध्ये एमाले नेता नेपाल समूह मन्त्रीमा जाने नजाने बारेमा अनिर्णीत छ ।
हाल सरकारमा जानका लागि देउवालाई मतदान गर्ने सांसदहरूमध्ये नेपाल, महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई यस मन्त्रीको दौडमा छैनन् । राजमोकी दुर्गा पौडेल पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छैनन् । ४ जना यसअघि नै मन्त्री बनिसकेका छन् । यसरी विश्लेषण गर्दा गठबन्धनका प्रतिनिधि सभाका १५६ सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडमा हानाथाप गरिरहेका छन् ।
माओवादीमा मात्रै नभएर जसपाका यादव र ठाकुर समूहमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा निकै सकस छ । यसो त प्रधानमन्त्रीकै पार्टी कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न दौडधुप गर्नेको लामै लर्को रहेको बताइन्छ । सत्ता गठबन्धन दलले १५–१८ वटा मन्त्रालय मागेकाले देउवालाई कांग्रेसभित्रै चित्त बुझाउन समेत निकै कठिन भइरहेको बताइएको छ ।
५. भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
७. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
११. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि
१३. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१५. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१६. शहरी विकास
कसलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे मेरो दिमागमा आतंक छाएको छ । हाम्रा ४९ जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । मन्त्री माग्न आउने हुलका कारण म ४/५ दिनदेखि मानसिक तनावमा छु । यहाँ मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ, त्यसैले पाएसम्म त ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाइदिन हुन्थ्यो ।
कोभिड महामारीको अवस्था उस्तै भइरहँदा समेत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । कोभिड व्यवस्थापन तथा भ्याक्सिन आपूर्तिको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा २४ सै घण्टा छलफल र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ तर मन्त्री नहँुदा सो कार्यले गति लिन सकेको छैन जसका कारण कोभिड व्यवस्थापन कार्य नै कमजोर हुन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छिटोभन्दा छिटो योग्य र कुशल मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।